Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. स्थनीय तहबाटै न्यायीक निरुपण हुन थालेपछि उजुरीको संख्यामा बृद्धि – Emountain TV
स्थनीय तहबाटै न्यायीक निरुपण हुन थालेपछि उजुरीको संख्यामा बृद्धि
काठमाडौं, २ जेठ । स्थनीय तहबाटै न्यायीक निरुपण हुन थालेपछि उजुरी गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको छ । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायीक समिति गठन भएसँगै सम्बन्ध विच्छेद, घरबाहाल लगायतका उजुरी गर्नेको संख्या बढेको हो ।
स्थानीय तहले नै घरबाहाल, साँधसीमाना, ध्वनी प्रदुषण, सम्बन्ध विच्छेद, सार्वजनिक स्थलमा बाधा लगायतका विषयमा उजुरी लिने र न्यायीक निरुपण गर्ने भएपछि उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायीक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार समिति गठन भइ मुद्धा हेर्न सुरु भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बैशाखसम्ममा ५ सय ५७ उजुरी परेको छ । जसमध्ये न्यायीक समितिले हेर्ने गरी एक सय वटा उजुरी परेका छन् । न्यायीक समितिमा परेका उजुरीमध्ये ६८ वटा उजुरी फस्र्याैट भइसकेका छन । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा ७ सय ५८ वटा उजुरी परेकोमा १ सय ५९ वटा उजुरी मिलापत्रसहित फस्र्याैट भएका छन् भने ५ सय ९९ उजुरी फस्र्याैट हुन बाँकि छ ।
यस अबधीमा काठमाडौं महानरपालिकामा सबै भन्दा बढी घरबहाल सम्बन्धी उजुरी परेको छ । त्यस पछि सम्बन्ध विच्छेद, साँधसिमाना लगायतका उजुरी परेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकामा भने साँधसिमाना सम्बन्धी उजुरी दिनेको संख्या बढी छ ।
कतिपयलाई अझै स्थानिय तहबाटै न्यायीक निरुपण हुने विषयमा जानकारी छैन । यस विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेमा उजुरी गर्नेको संख्या अझै बढ्नसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।